Sawirro: Ganacsadaha ugu weyn reer Puntland oo isku sharxay madaxweyne - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Ganacsadaha ugu weyn reer Puntland oo isku sharxay madaxweyne
Sawirro: Ganacsadaha ugu weyn reer Puntland oo isku sharxay madaxweyne
Garowe (Caasimada Online) – Eng Maxamed Cismaan Cali Maad oo kamid ah ganacsatada ugu waaweyn Puntland ayaa dhowaan ku dhawaaqay in uu isu tagay Xilka Madaxtinimo ee Puntland.
Musharaxan ayaa ku dhawaaqay Musharaxnimadiisa xili dambe iyadoo ay jireen rag ka horeeyay oo la arkayay iyagoo samynaya olale ay ku doonayan xilkaas in ay ku hantaan.
Maxamed Cismaan ayaa deggan Imaaradka iyo Ingiriiska waxaana ganacsigiisa marka laga soo tago Yurub Imaraadka iyo Soomaaliya uu ka shaqeeya Bartamaha iyo Galbeedka Afrika. inkastoo uu saaxibo badan ku laha siyaasadda haddana waa markii ugu horaysay ee uu sheego in uu u tartamayo xilkaas Madaxtinimo isla markana ay ku kaliftay sida uu ku sheeegay shaacintiisa marku arkay xaaladda dalka marayo..
Mar qura ayaa dabayaaqadii bishaan November lagu arkay magalooyinka waaweyn ee Puntland Sawirada Musharaxan maalqabeenka ah.
Puntland oo dhisan in ka badan 20 sanno weli kama gudbin nidaamka qabiilka oo lagu soo doorto Madaxweynaha waxana isku dayo badan oo lagu doonayay in uu ka hirgalo Nidaamka Xisbiyada Badan uu noqday mid fashilmay. Musharaxan ayaa sxb dhow la ahaa Madaxweynihii hore ee Soomaliya AUN Cabdullahi Yusuf Axmed isla markaana ahaa Asaasihii Puntland iyo Madaxweynihii ugu horeeyay ee Maamulkaas, wuxuuna Marxuumka ku muujiyay Musharaxan Maxamed Cismaan Cali Maad Buugiisi Halgan iyo Hagardaamo isagoo kaalintii ugu weynayd ka qaatay Xaaladihii Caafimad ee Marxuumka lagula tacaalayay.
Maxamed Cismaan ayaa u muuqda Musharaxa ugu da’da weyn inta hadda sharaxan waana aqoonyahan bartay Cilmiga Ingineeriyada. Shaacinta Ganacsadahan weyn ayaa wax badan ka badalaysa qaabka saadaalintii hore ee Doorashada Puntland marka loo eego xaladda ka jirta gudaha Puntland.
Dhanka dhaqanka oo iyagu leh Go’aanka soo saarista xildhibaanka ayaa sidoo kale la tilmaamaya in Ganacsahan maalqabeenka ah uu gacan saar la leeyahay.